Qalalaase ka Dhextaagan Ganacsatada Waaweyn iyo Kuwa YarYar ee Suuqa Islii (VIDEO) - Hablaha Media Network
Qalalaase ka Dhextaagan Ganacsatada Waaweyn iyo Kuwa YarYar ee Suuqa Islii (VIDEO)
HMN:- Waxaa maalintii afaraad xiran qaar kamid ah Dukaamada waaweyn ee ku yaala Suuqa Soomaalida ee Xaafadda ( Eastleigh) ama Islii ee magaalada Nairobi ee dalka kenya.
Waxaana markii danbe Rabshado u dhaxeeya ganacsatada Waratada ah ee Suuqada Islii iyo Ciidamada Booliska ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen suuqaaasi oo ah goobta loo soo ganacsiga tago ee magaalada Nairobi.
rabshadahani ayaa imaanaya kadib markii saaka dib loo furay qeybo kamid ah suuqa Ganacsiga weyn ee Soomaalida ay ku leeyihiinIslii.
Inkastoo qeybo ka mid ah suuqa saaka dib loo furay haddana waxaa wali xirnaa xarumo ganacsi oo muhiim ah, kuwaas oo loo furi waayay cabsi laga qabo boob ka dhasha rabshadaha ka socda suuqaasi Islii.
Keenyaatiga Waratada ah ayaa ku doodaya inay alaabta ay iibiyaan ay ka soo gataan dukaamda waaweyn ee soomaalida, ayna kadib nolol maalmood kooda kasii raadsadaan.